प्रविधि :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
क्यान महासंघको आयोजनामा आइसिटी कन्फरेन्स
अर्थ संसार काठमाडौं–क्यान महासंघको आयोजनामा काठमाडौस्थित होटल सोल्टीमा १७ औं आइसिटी कन्फेरेन्स सुरु भएको छ । इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी फर सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट विषयक सम्मेलनकोसूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले उद्घाटन गरे । ...
अर्थसंसार काठमाडौँ – के तपार्इं आफ्नो फेसबुकमा राखेको प्रोफाइल फोटोमा धेरै लाइक बढाउन चाहानुहुन्छ ? फोसबुकको प्रोफाइल फोटोमा धेरै लाइक बढाउन निम्न लिखित उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । ...
नेपालमै बन्यो सोलर हाइब्रिड कार
सविता सापकोटा काठमाडौँ – नेपालमै पहिलो पटक बिद्यार्थीहरुले सोलर हाइब्रिड कार बनाएका छन् । उक्त कार पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेज लामाचौर पोखराका इलक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले तयार पारेका हुन् । आठ जना विद्यार्थीले निर्माण गरेको योे कारमा चालकसहित ४ सिट क्षमता छ । यो कारलाई सोलारका अतिरिक्त ब्याट्रीबाट पनि चलाउन सकिन्छ । ...
विकास सम्बन्धी सबै प्रकारका डाटा अब एउटै वेबसाइटमा
अर्थ संसार काठमाडौं–तपाईलाई विकाससँग सम्बन्धित कुनै तथ्यांक चाहियो ? इतिहासमा कुनै कुरा कति थियो भनेर जान्ने उत्सुकता जाग्यो ? अब लगइन गनुस् nepalindata.com वेवाइट । ...
सूचना प्रविधिको मेला सुरु, आधुनिक प्रविधिका मोवाइल ल्यापटपलगायतका उपकरण प्रदर्शनीमा
अर्थ संसार काठमाडौं–क्यान महासंघको आयोजनामा सूचना प्रविधिको महामेला क्यान इन्फोटेक बिहीबार राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा सुरु भएको छ । महासंघले वर्षेनी आयोजना गर्दै आएको ‘सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१६ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ’ माघ १८ गतेसम्म हुनेछ । ...
गुगलको डुडल कसरी बन्छ ?
अर्थ संसार गुगल संसारको नम्बर एक सर्च इन्जिन । यतिमा मात्र यसको चिनारी पर्याप्त छैन । दर्जनौ प्रोडक्ट बजारमा ल्याइसकेको कम्पनीका लागि नेपालको मार्केट त्यति ठूलो छैन । बजार सानै किन नहोस्, गुगलले नेपालीभाषीलाई पछिल्लो समय निकै प्राथमिकता दिन थालेको छ । उसले नेपाल र नेपालसँग सम्बन्धित रामग्रीलाई आफ्ना प्रोडक्टसँग जोड्दै आएको छ । ...
किरातनिज्र्वल मुकारुङ मुकारुङ स्टुडियो, हाँडीगाउँ, काठमाडौं कुनै पनि नयाँ स्थान परिवेश या कार्यक्रममा सेल्फी खिच्नु सामान्य भइसकेको छ । मोबाइलबाट सेल्फी लिँदै तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर लाइक बढाउने ध्याउन्नमा धेरै हुन्छन् । अहिलेको युवा पुस्तामा यस्तो प्रवृति अत्यधिक पाइन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा लिएको सेल्फी आफूले चाहेजस्तो नआउन सक्छ । किन हुन्छ यस्तो रु आफ्नो चाहनाअनुसार राम्रो सेल्फी खिच्न...
सूचना प्रविधिको महामेला क्यान इन्फोटकेको तयारी पूरा
अर्थ संसार काठमाडौं–क्यान महासंघले आयोजना गर्ने सूचना प्रविधिको महामेला क्यान इन्फोटेकको तयारी पूरा भएको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार गरी यसको जानकारीदिएको हो । महासंघले वर्षेनी आयोजना गर्दै आएको ‘सुबिसु क्यान ईन्फोटेक २०१६ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ’ माघ १३ देखि १८ गतेसम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा हुँदैछ । ...